Naiwei Robot dia hanatrika ny Lighting Fair any Guzhen, Zhongshan
Naiwei Robot Technology Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 18 Febroary 2020. Ny teo alohany dia Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd., misy mpiasa maherin'ny 600, ozinina sampana 5 ary velaran-javamaniry 20 000 metatra tora-droa. Ny orinasa dia manana ekipa R&D manana traikefa azo ampiharina ...
Robot vaovao indostrialy robotika manerantany
Ny tatitra momba ny Robot Robot Manerantany 2020 Industrial Robots dia mampiseho firaketana robot indostrialy 2,7 ​​tapitrisa miasa amin'ny ozinina manerantany - fiakarana 12%. Ny fivarotana robots vaovao dia mijanona amin'ny haavo avo lenta miaraka amin'ireo singa 373,000 nalefa manerantany tamin'ny taona 2019. 12% ambany izany raha oharina amin'ny 2018, saingy mbola ...
Ny 27 aogositra, ao amin'ny kalandrie volana Sinoa, no andro mafana indrindra tsy mihetsiketsika, miantso ny andro DaShu
Ny 27 aogositra, ao amin'ny kalandrie volana Sinoa, no andro mafana indrindra tsy mihetsiketsika, miantso ny andro DaShu. Ny mpiasanay rehetra dia miasa fatratra, mba hanomezana masinina sarontava ASAP. Manantena izahay fa ny voankazo dia afaka mitondra mangatsiatsiaka amin'ny atrikasa, afaka mitondra mangatsiaka ho an'ny mpiasa tsirairay, ary mampatsiahy ny rehetra, raha fe ...
Ao amin'ny kalandrie tsinam-bolana sinoa, 7 jolay, dia Andron'ny Mpankafy Sinoa, Fetiben'ny QiXi. Naiwei Robot Technology dia nanao fety olon-tiana hankalazana.
22 aogositra, Naiwei Robot Technology dia nanao fivoriana fiderana
Ny 22 aogositra lasa teo dia nanao fivoriana fiderana ny Naiwei Robot Technology, feno fisaorana noho ny asa mafy nataon'ny mpiasa sy ny anjara birikiny ho an'ny fampandrosoana haingana ny orinasa, ary manome valisoa RMB300,000 ho an'ireo izay manana anjara biriky manokana amin'ilay fampielezana fanoherana ny COVID-19. Ao amin'ny kavina ...
Mba hankalazana ny lanonana fananganana faha-93 an'ny Tafika Fanafahana ny Vahoakan'ny China, nanao fivoriana tamin'ny Naivo veteran, izay nisotro ronono tamin'ny tafika ny Naiwei Robot Technology.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-01
Ho fankalazana ny lanonana fananganana ny faha-93 an'ny Tafika Fanafahana ny Vahoaka China, Naiwei Robot Technology dia nanao fivoriana niaraka tamin'ny veterana, izay nisotro ronono tamin'ny tafika, nankasitraka izaitsizy ny anjara birikin'izy ireo tamin'ny orinasa. ...
3 jolay, lanonam-panokafana ny Dongguan Shicheng Machines
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-03
3 jolay, lanonam-panokafana ny Dongguan Shicheng Machines. fiaraha-miasan'ny Naiwei Robot Technology sy ny Dongguan Hongxiang Machines. Mino izahay fa ho lasa iray amin'ireo mpanamboatra masinina maska ​​lehibe indrindra, mifototra amin'ny fiaraha-miasa mandresy fandresen'ny orinasa roa. ...
1 Jona, Naiwei Robot Technology dia mandamina ny mpiasa sy ny mpiasa mpitantana handinika ny fotoam-pamokarana azo antoka
1 jona, ny teknolojia Naiwei Robot dia mandamina mpiasa sy mpiasa mpitantana handinika ny fotoam-pamokarana azo antoka, hampitombo ny fahatsiarovan-tena amin'ny famokarana azo antoka, ary hanatsara ny fahafahan'ny mpiasa miatrika loza tsy ampoizina, hiantohana ny famoahana ny maotera servo haingam-pandeha ...
17 martsa 2020, tao amin'ny orinasa Naiwei Robot Technology, sahirana ny mpiasa manangona sy manandrana ny masinina fanaovana sarontava.
Fivoriana sy fitsapana It Notaterina fa, Naiwei Robot Technology, ilay teo alohany dia Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co., Ltd, izay manao fikarohana sy mamolavola ...